Sucuudiga oo diiday inuu Turkiga siiyo saldhig ciidan | Faaqidaad
By Editor on 18. June 2017 No Comment
Sucuudigu wuxuu diiday inuu Turkigu saldhig ciidan ka dhisto boqortooyada, isagoo yiri “Ma ogolaan karo” Ankara inay ka samaysato xarun noocan oo kale ah dhulkayga, sida ay ku warantay Wakaalada Wararka dalkaas.
Wakaalada Wararka Sucuudiga ee SPA oo soo xiganaysay masuul ka tirsan Riyadh ayaa ku warantay Sabtidii in aanay Boqortooyadu soo dhoweyn doonin Saldhig ciidan oo Turkigu leeyahay inta ay ciidamadoodu yihiin kuwo awood leh.
Warsaxaafadeedkani wuxuu yimi maalin kadib markii Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu u sheegay telefishinka RTP ee laga leeyahay Boortaqiiska inuu u bandhigay Sucuudiga 2014kii qorshe uu saldhig ciidan kaga dhisan lahaa dalkaas.
Turkiga wuxuu leeyahay ciidanka ugu balaaran Gaashaanbuurta NATO marka laga yimaado Maraykanka.
“Waxaan u bandhigay Boqor Salmaan, hadii ay suurtagal tahay in aanu Sucuudiga ka samaynsan doono saldhig ciidan. Waxay noo sheegeen inay eegi doonaan, balse ilaa maalintaas noogama iman wax jawaab ah” Ayuu yiri Erdogan.
Todobaadkii hore ayuu baarlamaanka Turkigu meel mariyey xeer dhigaya in si deg deg ah ciidamo loo geeyo Qadar. 2014tii ayey Dooxa ogolaatay inay martigeliso 4,000 oo askari oo Turki ah.
Turkiga oo xubin ka ah NATO waxaa heegan ugu jira ciidamo dhan 639,551, mudooyinkii dambe ayuu waday qorshayaal uu ku doonayo inuu cududiisa ciidan ku baahiyo Bariga Dhexe iyo Afrika.
Sucuudiga oo diiday inuu Turkiga siiyo saldhig ciidan added by Editor on 18. June 2017